Haddii aad raadinaya software DVD qoraa oo lacag la'aan ah ama inta badan loo yaqaan DVD free software gubanaya, waxaad u timaadeen inaad page saxda ah. Hoos waxaa ku qoran liis ka kooban oo ka mid ah barnaamijyada software keentay gubanaya 10 DVD oo aad ka heli kartaa oo kala soo bixi lacag la'aan ah si aad u bilaabi kartaa gubasho music CD ama DVD movie. Qaar ka mid ah xitaa aad taageero ka geysan karaan marka ay timaado gubanaya DVD HD Blu-ray. Halkaan waxa ay kala yihiin:
Qeybta 1: talinayo DVD software qoraa
Qeybta 2: 10 software qoraa DVD free
Qeybta 1: talinayo DVD software Qoraaga
Wondershare DVD Creator si fiican u yaqaan sida fudud ah si ay u isticmaalaan iyo DVD abuure awood leh oo gubi kara videos, Cajalado iyo sanamyadii iyadoo in ka badan 40 bedeley dhisay-in DVD si ay u abuuraan DVD cajiib ah.
Oo waxaa hadda waa si buuxda u la jaan qaada Windows 10 .
Taageerada ku dhawaad ​​kasta oo caan ah qaabab video aqbasho.
Waxay abuurtaa DVD ah oo khibrad leh 40 arrimo menu + xirfad loogu talagalay.
Personalizes videos iyo arrimo menu hor cajalid gubanaya.
Aad u saamaxaaya in ay la saaxiibadaa iyo qoyskaaga wadaagaan DVD ku abuuray.
OS taageerayaan: Windows 2003 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 , Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Qeybta 2: sareysa software qoraa 10 DVD
Tani waa codsiga yar Timid Koox ka mid ah muuqaalada sare oo kala duwan oo way gubi karaa CD, DVD, cajalladaha Blu-ray iyo HD DVD. ImgBurn taageertaa kala duwan oo badan oo qaabab file image ay ka mid yihiin QASHIN, DVD, DI, MDS, PDI iyo NRG. Codsiga waxa kale oo ay taageertaa folder ama file koodh caalamiga magacyada, sidaa darteed, ma waxaad la kulmi doontaa dhibaato marka aad isticmaasho set oo ah qof shisheeye. Tani waa app ugu fiican in aad isticmaasho marka aad la tacaalaya image files si joogto ah. Waxaad u isticmaali karaan in dhismaha DVD video saxanno, Blu-ray video cajalladaha iyo HD DVD video cajalladaha fudayd.
Baro wax badan oo ku saabsan ImgBurn >>
Tani waa qalab wax ku ool ah oo aad u isticmaali kartaa in boobka, gubasho iyo sidoo kale in hanashada DVD, CD, Blu-Ray & HD-DVD warbaahinta. StarBurn taageeraya nooc kasta oo indhaha kaydinta warbaahinta sida CD-R / RW, BD-R / RE, DVD + R / RW, DVD-RAM iyo HD-DVD_R / RW oo ay ku jirto xulashada badan oo hardware gubanaya. Iyadoo StarBurn, users hadda la qabsado ka dibna nuqul karo iyo hawlaha iyo hanashada DVD sare iyo qoraalka gubi.
Kuwani qaababka cusub oo u oggolaan doonaa in aad content DVD video ka caadadii video files, iyo compilations soo socda ka DVDs kale. Marka laga soo tago in, iyadoo la kaashanayo Wizard DVD tageynaa, waxaad ka dillaacisay yaabaa DVD video cajalladaha in qaybo yar oo markaas waxaad iyaga ku gubi karaa in cajalladaha writable DVD iyo wadaag adigoo isticmaalaya emulator StarPort DVD-ROM ee. Iyadoo in, awoodo DVD video on your computer si toos ah aad.
Baro wax badan oo ku saabsan StarBurn >>
Kanu waa doorashada ugu horeeysa ee software diinta video oo loo isticmaali karo in diinta iyo gubasho wax videos sida AVI in DVD, MKV in DVD, wmv in DVD, MPEG, OGM, iyo MOV quicktime. Tani guulaystay Abaal-marinta DVIX in DVD video Converter audio iyo video qaabab gubashada ah in DVD. Wareejinta waxaa ka mid ah video taageertaa DIVX, AVI, MKV, XVID, VOB, VCD iyo DVD. Tani waa software ka dhan-in-mid video gubashada iyo diinta in aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan.
Baro wax badan oo ku saabsan ConvertXtoDVD >>
4. Express Gubashada
Waa software free DVD / CB dab ololaya ay ogolaan kartaa in aad si ay u sameeyaan iyo xogta record iyo CD-yada audio hoos Mac OS X iyo Windows. Waxaa la iman interface user-friendly ah. Si aad u isticmaasho waxa ka mid ah, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waa inaan ka dhaansado iyo hoos u faylasha. Tani waxay la mid la casriyeeyay karaan in ay version Plus si aad u furid karo hawlaha dheeraad ah oo qiimo hubaal waad awoodi karin.
Deep gubi Free qaadan karo, sida magacaba ka muuqata, waa codsi degdeg ah DVD / CD ku gubanayso. Waxaa ka shaqeeya warbaahinta aad la qaadi karo si toos ah, iyadoo aan loo eegin haddii ay tahay kaarka is flash, USB flash drive, ama disk ah kumbiyuutarka. Iyadoo Deep gubi Free qaadan karo, aad nuqul karo cajalladaha kasta, gubi wixii macluumaad, la abuuro hayaan, markaa samee CD ISO in habka ugu fudud.
5. baacsanayo CD / DVD Gubidda
Software Tani waa ku haboon dadka ka fikirayso in barnaamijyada olol ah sida WinOnCD iyo Nero yihiin mid aad u buux la functionalities loo baahan yahay in ay qof walba. Baacsanayo CD / DVD Gubidda iman mayso xarun warbaahinta, editor la ruxruxo, iyo xuubkii naqshadeeye. Marka laga soo tago in, ma ka dhigi kartaa videos. Software Tani waxay ka gubtay DVDs iyo CD-yada iyo waxa ay bixisaa dhammaan tallaabooyinka aad u baahan tahay.
Baro wax badan oo ku saabsan la baacsanayo CD / DVD Gubidda >>
BurnAware oggolaan doonaa in aad si fudud u fuliyaan howlaha ugu caadiga ah gubashadii disc. Waxaa ka mid ah qoraal ahaan al DVD noocyada warbaahinta / CD sida Blu-Ray, sameeyo oo aad sanamyadooda disc, qori cajalladaha multi-fadhiga, xaqiijin daacadnimada files ', oo si toos ah warbaahinta indhaha gubi compilations, oo aan u baahan in ay sugto ah drive ay adag tahay in hore deer.
Baro wax badan oo ku saabsan BurnAware >>
Software Tani waxay sidoo kale waa DVD ah oo lacag la'aan ah ama CD xal gubanaya loogu talagalay Microsoft Windows. Mid ka mid ah waxa uu ku siinayaa noocyo kala duwan oo badan oo ka mid ah qaababka cajiib ah oo ay ka mid fudud oo ah in la isticmaalo interface codsiga & Windows Explorer is-dhexgalka.
Baro wax badan oo ku saabsan InfraRecorder >>
Waa codsiga lacag la'aan ah in loo isticmaali karaa si ay u gubaan DVDs iyo CD-yada waxaa ka mid ah in HD-DVDs iyo Blu-Ray. Waxa kale oo la Timaadda awood u leeyahay inuu ku shido oo waxaad ka samaysaa ISOs, oo qoreysa interface Multilanguage ah. Qof walba isticmaali kartaa software this bilaash ah oo ku iman mayso adware ama wax kasta oo qayb xaasidnimo ku habboon.
9. Free Easy gubi
Software Tani waxaa sidoo kale loo yaqaan in ay CD ugu fudud oo lacag la'aan ah iyo software gubanaya DVD in gubi karaa xogta, video ama maqal ah si CD iyo DVD. Waxa ay taageertaa qaabab audio kala duwan sida regelingen, MP3, WMA, helowax, AAC, FLAC, iyo M4A. Iyada oo ay taasi, si fiican u markaas aad gubi karaa badbaadin faylasha aad ISO iyo DVDs nuqul.
Baro wax badan oo ku saabsan Free Easy gubi >>
Kan sameeyey DVD Tani waa doorasho ugu fiican ee DVD cirib Alternative for Windows, maxaa yeelay waxa ay leedahay hawlgallada deg deg ah, u shaqeeyo si hufan, oo waxaa jira wax badan oo kala duwan oo la heli karo. Waxaa waxan sameeya aan wareeriya user dhamaadka, iyadoo aan loo eegin in aad rabto in aad si ay u abuuraan gurmad ah oo fudud oo ah waraaqaha ama DVD xirfadle raadinaya aad ururinta shineemo guriga. Waa fursadaha ka mid awood u leh inay ku darto ah bogga ku jira, subtitles iyo koob cutubka.
> Resource > DVD > Top 10 DVD Free Writer Software